ग्रीस मा, सबै दुनिया माउन्ट Accommodation लातविया Accommodation भन्दा प्रसिद्ध मा, Vatopedi को नाउँ वहन कि विहार मा, यो 17 औं शताब्दीमा एक अद्भुत प्रतिमा मान्छे शान्ति र जीवनको आनन्द पाउन मदत छ। "परमेश्वरको Vsetsaritsa को पवित्र आमा" - हामी "Pantanassa", वा छवि बारेमा कुरा गर्दै छन्।
प्रतिमा एक रोचक इतिहास छ। यो को प्रसिद्धि चर्च आगंतुकों अचम्मको घटना साक्षी जब तब देखि शहर र गाउँ, गए। पौराणिक कथा अनुसार, एक पटक म एक जवान मानिसको छवि आए। तर उहाँले केही जवान तर्फ र शाब्दिक तल्ला गर्न हालियो हालियो जस्तै नजिक आएका थिए। त्यसपछि आफ्नो ओठ बाट तातो penitential प्रार्थना बग्ने। "Vsetsaritsa" यो जवान, जादू र sorcery मा लगे छ चिप्लो र गाढा बाटोमा खुट्टा सेट, र यसैले, आफ्नो प्राण नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ दुष्ट शक्तिहरूको को शिकार बन्न महसुस रूपमा। परमेश्वरको गहिरो हैरान साईट जादूगर शक्ति को यस्तो अद्भुत प्रकटीकरण। उहाँले, परमेश्वरको क्रोध मानिसहरू डराउँदैनन् पश्चात्ताप र सभ्य जीवन नेतृत्व गर्न थाले। त्यो प्रार्थना के regenerating छ हो! "Vsetsaritsa" देखि आकर्षित र सबै दुनिया भर देखि मान्छे आकर्षित भएको छ। के उनको नजाऊ मात्र आवश्यक! सबै को पहिलो, को सिकार ऊर्जा विभिन्न नकारात्मक प्रभाव: भ्रष्टाचार, दुष्ट आँखा, आकर्षण। साथै क्यान्सर बाट पीडित। र निको पार्ने धेरै प्रमाण छ!
वास्तवमा, परमेश्वरको आमा प्रत्येक छवि खाँचोमा परेका गर्न अमूल्य सहयोग प्रदान गर्न सक्छन्। भवदीय आफ्नो प्रार्थना थियो कि मुख्य कुरा। "Vsetsaritsa" एउटै - तरिका विशेष। त्यो साँच्चै सुन्दर, छैन measurable शक्ति छ भन्ने तथ्यलाई, उनको नाम भने। यसलाई ", संसारको रानी" "सबै को लेडी लागि खडा छ।" अचम्मको कुरा छैन, तिनीहरूले जादूगर एक पटक महारत छ जसले दुष्ट को छवि भरिएको थियो। र यसलाई दुष्ट डाली मदत गर्न सक्छ, किनभने purified मानिसहरू अशुद्ध द्वारा कब्जा। र भिक्षुहरूले, मन्दिर सेवकहरू, यो सुविधा थप देख्यौं। जब ध्वनि वा त्यो प्रार्थना, "Vsetsaritsa" रूपमा चुपचाप चमक शुरू, चम्कने। ग्रेस जस्तै प्रतीक आउँछ। यो मान्छे मा एक लाभदायक प्रभाव छ जो त्यो थियो। त्यो कारण सबै अर्थोडक्स तरिका लागि किन यस्तो श्रद्धाको र आदर छ। र यो मसीही चर्च छ एक सम्मान छलफल सूची। हो, निजी र, घर iconostasis हेर्न - असामान्य छैन छन्।
"Pantanassa" कसरी? प्रतिमा रीगल क्रिमसन राज बस्त्र मा लुगा को भर्जिन, चित्रण गरिएको छ। त्यो एक सिंहासनमा बस्छन र आफ्नो मुक्तिदाता समातेर। आफ्नो बायाँ हात मा शिशु पुस्तक दायाँ र उहाँले सबै कुरा आशिष् दिनुहुन्छ। छवि solemnity, चम्किलो, रंगीन हडताली। अनमोल भर्जिन मरियम "Vsetsaritsa" को एउटै Solemn प्रार्थना। "अनुकूल शब्द जीवित" विश्वास र आशा प्राण भरिन्छ। उहाँले त्यहाँ अलार्म र परीक्षण जीवन प्रमुख, रक्षा रक्षा गर्न केहि छ कि, एक्लै थियो, मानिस थाहा - तर यो त महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी यदि परिवारको मानिस आफैले वा कसैलाई भयानक रोग द्वारा प्रहार भएको थियो - क्यान्सर। यो कि ज्ञात छ akathist र प्रार्थना प्रतिमा "Vsetsaritsa" अघि बारम्बार मूर्त राहत, तर पनि वास्तविक रिकभरी मात्र होइन ल्याए। त्यसैले, "Pantanassa" को सूची तिनीहरूलाई धेरै क्यान्सर अस्पताल र monasteries वा चर्च छ: प्रयास गर्नुहोस्।
स्वस्थ हुन र परमेश्वरले आशिष्!
मल रूपमा परेवा गोबर प्रयोग
साना बच्चाहरु परिवारको लागि6भन्दा राम्रो कुकुर जातिहरु
Hromoenergetichesky जटिल: एक विवरण र समीक्षा
"डर लागि उपचार": टिभी शो हेर्न
Pupils लागि सामाजिक परियोजनाहरूको तातो शीर्षकहरू: उदाहरणहरू